Kitra - «Orange Pro League» :: Hampitamberina ny famaranana 2019 ny Fosa Juniors sy AS Adema • AoRaha
Kitra – «Orange Pro League» Hampitamberina ny famaranana 2019 ny Fosa Juniors sy AS Adema
Lalao sangany isan’ny andrasan’ny maro amin’ny andro faha-11 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra, Diviziona elita na ny “Orange Pro League” ny lalao hifanandrinan’ny Fosa Juniors sy ny AS Adema. Hamarana ny fihodinana voalohany na ireo lalao mandroso eny amin’ny kianjan’ny Elgeco Plus By Pass ity lalao famaranan’ny taom-pilalaovana 2019 ity.
Tamin’ny fiafaran’ny fifaninanam-pirenena tamin’ny taon-dasa no niondrika teo anatrehan’ny Fosa Juniors, tamin’ny isa 2 noho 1, tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny ekipan’ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara ka naha voahosotra ny solontenan’i Boeny ho tompondaka. Nitarika tamin’ny isa 0 noho 1 anefa ny AS Adema tamin’izany saingy voasongon-dry Théodin sy ny namany, ka nahazoan’izy ireo tapakila hisoloana tena an’i Madagasikara teo amin’ny fifaninanana afrikana.
Lalao hanamarika ny fiafaran’ny lalao mandroso ihany koa ny fifandonana eo amin’ny Ajesaia sy Cosfa, izay mitana ny toerana roa voalohany eo amin’ny filaharana vonjimaika. Hotanterahina eny amin’ny kianjan’i Vontovorona io lalao io, amin’ny alahady ho avy izao. Ny sabotsy kosa no hampiantrano ny lalaon’ny Cnaps Sport sy ny Tia Kitra ny kianjan’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy. Hihaona, aorian’izy ireo, ny AS Jet Mada sy ny Elgeco Plus.
Any amin’ny faritra hafa no hanaovana ireo lalao roa ambiny amin’ny andro faha-11. Hampiantrano ny ekipan’ny 3FB Toliara ny Zanakala FC ao amin’ny kianjan’Ampasambazaha, Fianarantsoa, amin’ny alahady ho avy izao. Ny FCA Ilakaka kosa no hanafika any amin’ny kianjan’i Barikadimy, Toamasina, ka hifandona amin’ny Club M Mananara.
Aorian’io andro farany amin’ny lalao mandroso io dia hifantoka amin’ny lalao miverina, izay hisy andro iraika ambin’ny folon indray ireo klioba mpifaninana.
Fisorohana fanararaotam-pahefana :: Mitoetra ny fitakiana ny fitsipi-pitondran-tena amin’ny governemanta